သင်ရုံးမှာမှတ်စုရေးထားလေ့ရှိပါသလား? သင်ပြုလုပ်တတ်ပါက သင့်မှတ်စုတွေကို သင်ဘယ်လောက်မကြာခဏပြန်လည်သုံးသပ်တတ်ပါသလဲ? မှတ်စုရေးမှတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဟာလည်း သင့်အလုပ်မှဘာတွေကိုလေ့လာခဲ့တယ်၊ ဘာတွေကိုသတိပြုမိတယ်ဆိုတာတွေကို ပြန်သတိရစေမှာပါ။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ မေ့တတ်ကြပါတယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သင်လေ့လာသင်ယူထားတဲ့အရာတွေကို မေ့လျော့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာအရည်အချင်းနဲ့ဗဟုသုတများလေလေ၊ သင်ဟာပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရလေလေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Meeting တစ်ခုအတွင်းမှာ Meeting Minute မှတ်တမ်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆွေး‌နွေးချက်တစ်ခုမှာအ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ Point ကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းနားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သဘာဝအားဖြင့် ငယ်ရွယ်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေဟာ ပထမဦးဆုံး Meeting Minutes ကိုရေးရန်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် ရေးတာများလာလေလေ သင့်အတွက်ပိုအကျိုးရှိလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။
[သင်ဟာအသစ်ဝင်လာတဲ့သူဖြစ်ရင်တောင် အစည်းအဝေးတွေမှာ စကားပြောဆိုတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ]
ကုမ္ပဏီကိုအသစ်ရောက်ရှိလာသူတိုင်းက သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်မျာ စံသတ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ Senior အဖွဲ့ဝင်များ (သို့မဟုတ်) သင့်ရဲ့ သူဌေးက သင့်အားကောင်းမွန်ပြီး ယုတ္တိရှိတဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်လိုမျှော်လင့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း သင်ရဲ့အသစ်အဆန်းသော အတွေးအခေါ်တွေ၊ ထင်မြင်ချက်များကိုမျှော်လင့်ကြတတ်ပါတယ်။ သင်ဟာသင်ရဲ့ Client တွေ၊ Customer တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတခုကို ရသွားသလိုပဲ သင်လည်း ခံစားရမှာပါ။ သင့်ဘယ်လိုထင်မြင်လဲဆိုတဲ့ သင့်ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်စရာမလိုပါဘူး။
တခြားသူရဲ့အချိန်ကိုဘယ်သူမှမထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ချိန်းဆိုမှုများမှသင်ရဲ့အချိန်ဇယားကိုဆုံးဖြတ်ရန်အကြံပြုလိုပါတယ်။ အကယ်၍ Appointment ရက်ချိန်းယူမယ့်နေ့ရက်နဲ့ အချိန်ကို သင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက သင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအတွက် နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ကိုသင်သိနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ Productivity ကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ လူငယ်စီးပွားရေးသမားတွေဟာ ယုတ္တိရှိတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း (သို့) ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကို အခြား Senior ၀န်ထမ်းများထက်သာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Senior ၀န်ထမ်းများထက် အလုပ်အတွေ့အကြုံပိုများရန်လိုအပ်ပါတယ်။